Maxaa Looga Hadlay Kulankii Koobaad Ee Kalfadhigii Saddexaad Ee Aqalka Sare – Kalfadhi
10-kii bishii Maarso ayaa si wadajir ah loo furay kalfadhigii saddexaad ee Golayaasha Baarlamaanka 10-aad.
Halkan waxaan idin kugu soo gudbineynaa wixii looga hadlay kulankii koobaad ee kalfahdigii saddexaad ee Aqalka Sare.
13-kii Maarso 2018-kii, maalin Talaado ah ayay sanatarrada Aqalka Sare qaateen kulankoodii ugu horreeyay ee kalfadhiga saddexaad, waxaana shir guddoomiyay guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi Iyadoona ay xaadireen kulanka 28 xildhibaan.
Guddoomiye Cabdi xaashi oo ka hadlay maalinkaas ayaa sheegay in kalfadhiga saddexaad Aqalka sare ay horyaallaan sharciyo ay ka mid yihiin meel marinta xeerka dhawrista gobonnimada iyo midnimada gayiga Soomaaliyeed, hindise shacriyeedka biyaha iyo hindise sharciyeedka guddiga la dagaalanka musuq maasuqa.
Intaas kaddib waxa uu Guddoomiye Cabdi Xaashi sheegay in ajandaha maalinkaas uu yahay laba arrin kalana ah xeer uga soo gudbay Golaha Shacabka iyo in laga hadlo weerarkii lagu qaaday guriga Sanatar Cabdi Xasan Cawaale “Qaybdiid” taariikhu markii ay ahayd 30-kii bishii Diseembar 2017-kii.
Waxaa la guda galay in mudanayaashu ay ka hadlaan weerarka lagu qaaday guriga Sanatar Cabdi, waxaana warqad ku socotay guddoonka Aqalka Sare halkaas ka akhriyay hoolka Sanatar Maxamed Amiin Sheikh Cismaan.
Nuxurka warqaddaas waxa ay ahayd cabasho loo gudbinayay mudanayaasha Aqalka Sare iyo faaf-faahin qaabka wax u dhaceen.
Sanatar Maxamed Amiin oo akhrinaya warqadda cabashada
Intaas kaddib waxaa isna hadlay Sanarar Cabdi Xasan Cawaale ayaa sheegay in muuddo ka badan laba bil aan waxba laga qaban weerarkii lagu qaaday gurigiisa.
Qaybdiid oo sharraxaya sida weerarku u dhacay
Sanatar Mustaf Maxamuud “Qodax” ayaa isna ka hadlay maalinkaas Golaha Aqalka Sare waxa uuna sheegay weerarkaas uu ahaa dambi laga galay qaranka labada golana looga baahanyahay in ay isku hawlaan sidii natiijo rasmi ah looga keeni lahaa
Sanatar Deeqa Xasan Xuseen ayaa iyana sheegtay in loo baahanyahay in guddi loo saaro kana soo tala bixiyaan halka wax ay ku dambeeyeen si ay go’aan uga qaataan.
Sanarat Maxamuud Axmed Mashruuc ayaa ku tilmaamay weerarkaas arrin murugo leh iyo ku xad gudub aan sinna loo aqbali Karin iyadoo la adeegsanayo “ciidanka qaranka Soomaaliyeed”
Sanatar Mashruuc oo dhaliilaya weerarka qaybdiid
Sanatar Farxaan Cali Xuseen ayaa isna maalinkaas ka sheegay kulankii koobaad ee kalfadhigii saddexaad in dambi laga galay sharciga iyo Sanatar-ka, isla markaana kan Sanatar-ka xitaa haddii uu cafiyo ay qasab tahay in la maro ciqaab kale oo ah dambii laga galay sharciga.
Sanatar C/waaxid Cilmi “Goonjeex” ayaa sheegay in isagu uu qabo in aan guddi la saarin balse si toos ah loo weydiiyo reysul wasaaraha waxa arrinka weerarka laga qabtay iyo waxa hortaagan, isla markaana warqad loo qoro.
Sanatar Goonjeex oo ku baaqaya in Rw warqad loo qoro
Sanatar Axmed Xaashi Maxamuud ayaa isna goobta ka sheegay in ay u baahanyihiin in ay u yeeran wasiirka koobaad isla markaana ay su’aalo ka weydiiyaan sababta waxaan u dhaceen. Wixii intaas dhaafsiisanna ay noqonayaan waqti lumis.
28 Xildhibaan oo maalinkaas kooramka soo xaariday 23 ka mid ah waxaa ay u codeeyeen in guddi loo saaro arrinta Qaybdiid, 4 Sanatar-na waxa ay u codeeyeen in raysul wasaaraha loo yeero halka hal xildhibaan uu ka aamusay.
Guddigaas waxaa guddoomiye ka ahaa Sanatar Maxamed Amiin Shiikh CIsmaan waxaana hubo kala ahaa xildhibaanno ay ka mid yihiin Sanatar Axmed Xaashi iyo Sanatar C/laahi Shiikh Ismaaciil Fartaag.